8-dii Daqiiqo ee Dubbe, 8 jawaabood oo ka dhan ah iyo doodda ka dhalatay!!
April 8, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 8
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Osman Dubbe , wuxuu shalay jeediyey hadaljeedin saxaafadeed oo soconaysay 8daqiiqo, waxay ahayd mid xasaasiyad lahayd marka loo eego mawduuca xulashada ka hadalkiisa la sugayey waana tubta Doorashooyinka Soomaliya, Puntland & Jubbaland ayuu hoggaamiyayashood kusifeeey in ay doorasho diid yihiin, wuxuu adeegsada Weedha “JID & JIHO DIID”!
8 Daqiiqo ee Dube, waxaa ka jawaabceliyey masuuliyiin katirsan maamulada la eedeeyey & Mucaaradka doonaya Madaxtinimada dalka qaarkood, waxayna kala ahaayeen cida jawaab-celinta keentay & xulushada weedhahood!.
1- Madaxweyne Deni, oo yiri “Dubbe maanta waa nala joogay dharkaasna ma sidan”
2- Wasiirka Warfaafinta Puntland, oo yiri “Godka Lagu cadaabyow”
3- Wasiiru dowlaha Madaxtooyada J/Land oo yiri “Aniga aakhiro lay soo taagi maayo Dhar-Bedelashada Dube”
4- Hadal-hayeenka Madaxweyne Deni oo yiri “Godka Lagu cadaabyow”
5- Warqad ay wada jir u soo saaren Jubbaland & Puntland “Shirka waan joogaynaa, ma fashilmin”
6- Cabdiraxmaan Cabdishakuur “Dube, horey buu u duubay Muuqaalka kahor natiijada shirka”
7- Madasha Midowga Musharaxiinta oo walaac kamuujiyey hadalkiisa.
8- Taageerayaasha labada dhinac “DUBE DHAR-BADANAA”
Xukuumadda Faderalka, Cismaan Dube oo kaliya ayaa hadlay, laakiin 8daqiiqo waxay ka hadalsiisay 6 dhinac oo qolo kasta si Hal-haleel ah u jawaabtay!
– Hadal-hayeenka Madaxweyne Deni oo yiri “Godka Lagu cadaabyow” kķkkkk xaladii deni ma waxey mareysaa HABAAR mise aaqira ayuu mooday meel isaga uu ka taliya.
Dubbe waa Dubbe, dubbuhuna is ma isticmaalee qof baa isticmaala!!!
Ninka yiri waxbaan gani anoo gol iyo cayn jooga, ee yiri baddaa garacad baan gudub u weydaarin, daraawiista ilig ka gaardiyi ninkaas guudka kaga keenay, godka lagu cadaabyow muxu go’uhu been sheegay. Waxaa tiriyey Sayidka waxaa loo tiriyey Fagaase. Fagaase gabaygiisu wuxuu ahaa: hootadaan gol dheeriyo ka riday xanano guudkooda, waxay sii giglaysaba hadday hogobyo eyl gaartey, wadaadkii sidee uga gabaday waa golmarankiiye.
Xukuumadda Faderalka, Cismaan Dube oo kaliya ayaa hadlay, laakiin 8daqiiqo waxay ka hadalsiisay 6 dhinac oo qolo kasta si Hal-haleel ah u jawaabtay! Kkkkkk
Puntlander waa in Deni laguu baxshaa.
@@@ Maleeshiyada Farmaajo oo gubtay calan Towxiidku ku qoran yahay
Dhibaatooyinkii laga dhaxlay xukuumaddii askarta ee keligitaliska ahayd dhanka siyaasadda waxaa ka weyn dhanka mujtamaca, taas oo qaadan doonta jiilal badan si loo saxo; waaba haddii la helo hoggaan suubban.
Askartu waxay ahaayeen mujtamaca Soomaalida kuwa ugu diin yar, ugu khamri-cab badan, ugu akhlaaq xun oo ugu fasaad badan. Saraakiisha badankeed waxaa lagu soo tababaray Soviet Union, waxayna in badan oo ka mid ah lasoo noqdeen khamri-cabbid iyo akhlaaq-xumo. Saraakiil-xigeenka iyo dableyduna waxay u badnaayeen rag iyagoo waaweyn miyi ka yimid oo aan waxbarasho dugsi Qur’aan iyo Iskuul soo marin.
Xeryaha ciidanka kama jirin wax diin ku saabsan. Haddiiba masjid jiro wuxuu ahaa mid shakhsiyaad isxilqaamay meel u xaarxaaraan amase waab ka dhisaan. Kuma jirin siyaasadda xukuumadda iyo tan Wasaaradda Gaashaandhigga qorshe amase miisaaniyad loo qoondeeyey baahida diineed ee askarta. Waxaa layaab leh gaalada calmaaniyiinta ah askartooda waxaa la socda baadariyaan shaqadoodu tahay arrimaha diinta oo qura. Xitaa haddii ay askarta ku jiraan shakhsiyaad muslimiin ah, waxay taliyeyaashoodu isku dayaan in baahidooda diineed la tixgaliyo.
Dhowaan dagaalkii dhexmaray ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab, waxay askartu qabsadeen calanka madow ee Al-Shabaab ee ay ku qoran tahay: لا إله إلا الله محمد رسول الله. Waxay nasiibdarro ah in maleeshiyada Bakhtidhawr (Gorgor) ay gubeen calankii ashahaadadu ku qornayd! Waxaa Sunnada kusoo aroortay in Rasuulka ﷺ uu lahaa calan madow oo ay qoran tahay: لا إله إلا الله محمد رسول الله; Al-Shabaab calankoodu taas ayuu salaysan yahay ee ma aha wax iyagu sameysteen. Waxaa isweyddiin leh maleeshiyada Farmaajo ma kala garanwaayeen waxa Al-Shabaab afduubeen ee ay adeegsanayaan iyo waxa asalka ah ee muqadaska ah? Sidee u gubeen calan ashahaadadu ku qoran tahay iyagoo muslimiin sheeganaya? Tan kale, waxay ahayd in calanka la keeno Wasaaradda Gaashaandhigga oo halkaas lagu xafido amase la dhigo mutxaf sababtoo ah waa xusuus dagaal kharaar oo dhacay, waana dhacdo ka mid ah taariikhda Somalia.
Turkiga inkastoo madaxdiisu yihiin muslimiin diinta shakhsiyan ugu dhaqma, haddana, ciidankoodu weli waa calmaaniyiin, marka, ciidanka Turkiga keliya lagu soo tababarayo, khatar mustaqbalka ah ayaa ka soo wejihi karta dalka iyo dad Soomaaliyeed. Maxaa, matalan, looga codsanwaayey dalalka Pakistan, Masar, Malaysia inay ciidan noo tabobaraan?
Abdikarim baaqorow says:
Erteria yaa Somalia iyo Ethopia duugi Rabat waxaana adeegsan maxamed dalxaan oo farmaajo kula taliyay inuu jiidho maamul gaboleed saldhiga Emaaraadka Ee Ertaria waxaa tababar ugu jira kuwii somaaliya rogi lahaa marmaajo haduu dhowyahay
Farmaajo haduu dhowyahay intuuna Somaliya burburin Somaali Nabada hadbaadiso maxamed dalxaan yaa hoosta lagu wataa 3 jeer lala kumay Saldhiga Emaaraadka ee Ertaria kuyaal waxuu ladagaali wadan kacdoon Dimuqraadiyad ku gaadhay si aan loogu kicin Emarat iyo sucuudi Arabia yaa wata fiiri Sudan somaliya siria lubnan liibiya masar ciraaq burdon. Farmaajo haduu dhow yahay meel fog yayina idinku tuurin figtu hadalka khabiirka qaata ama tuura